चार लाखको प्रश्नः हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
चार लाखको प्रश्नः हाम्रो भविष्य के हुन्छ ?
काठमाडौं, असार ११ । लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिएका झन्डै ४ लाख आवेदकले आफ्नो भविष्यका बारेमा प्रश्न गरेका छन् । लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापनको अन्तिम दिन मंगलबारसम्म परिक्षाका लागि आवेदन दिएका चार लाखको भविष्य सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले निर्धारण गर्ने भएको छ ।
नियमित दस्तुर तिरेर आवेदनका लागि दिएको समयावधिभित्र मंगलबार सा“झ ५ बजेसम्म ३ लाख ६७ हजार ६९७ जनाको आवेदन दर्ता भएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । जसअन्तर्गत खुलातर्फ ३ लाख ६३ हजार १८४, महिलामा ८८ हजार ७६६, जनजातितर्फ ३७ हजार ९८०, मधेसीतर्फ २१ हजार ७९४, दलिततर्फ २ हजार ७१०, अपांगता भएकातर्फ १३१ र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ १०१ जनाको आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
यससम्बन्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम फैसलाले ४ लाखको संख्यामा आवेदन दिएका आवेदकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । आवेदनबापत झन्डै साढे ८ करोड राजस्व संकलन भएको छ । आयोगले राजस्वबापत ७ करोड ९५ लाख ६६ हजार ८ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएको छ ।
आयोगल दिएको आवेदनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजेबाट समाप्त भइसकेको छ । आजबाट १ हप्तासम्म अर्थात् असार १७ गते राति १२ बजेसम्म दोहोरो दस्तुर बुझाएर आवेदन दर्ता गर्न सकिने आयोगले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा समेत उल्लेख्य मात्रामा आवेदन दर्ता हुने आयोगको अनुमान छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
ट्याग्स: public service commission